Seychelles dia manasongadina ny e-Gift Platform an'i Palazzo Versace Dubai
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Seychelles » Seychelles dia manasongadina ny e-Gift Platform an'i Palazzo Versace Dubai
Seychelles dia manasongadina ao amin'ny E-Gift an'i Palazzo Versace Dubai
Miara-miasa amin'ny Palazzo Versace Dubai, ny Seychelles fizahan-tany momba ny fizahan-tany dia nametraka ilay toerana ho eo ambanin'ny sain-java-mahaliana amin'ny alàlan'ny E-Gift Platform ao amin'ny hotely.
Ao amin'ny ara-dalàna vaovao eto amin'ity tontolontsika lavitry ny fiaraha-monina ity, tsy mitsaha-mitombo ny fanomezana digital.
Ny fanomezana ezaky ny Palazzo Versace Dubai dia manolotra fanomezana mahafinaritra avy amin'ny fijanonana lafo vidy, amin'ny fitsaboana spa, ka hatramin'ny fanomezana sakafo, sy maro hafa.
Tsy misy mandritra ny fotoana voafetra ihany ireo fanolorana fifanarahana sy fahavaratra tsy manam-paharoa ireo.
Ny sehatra E-fanomezana an'i Palazzo Versace Dubai dia manolotra traikefa voatahiry manokana avy amin'ny fijanonana lafo vidy sy ny fitsaboana spa milamina mankany amin'ny fisakafoana akaiky, fanomezana miavaka izay mamorona fahatsiarovana maharitra.
Miakatra hatrany ny fangatahana fanomezana nomerika rehefa manitsy ny 'ara-dalàna vaovao' izao tontolo izao, STB dia mijanona mifanaraka amin'ny baikon'ny fiantohana ny fahitana ireo nosy, manome ny mpitsidika ny fidirana amin'ny nosy tsy manam-paharoa atolotry ny paradisa tropikaly.
Ao anatin'ireto tolotra luxe ireto, ny mpanome fanomezana dia afaka mividy traikefa 4,000 XNUMX AED farafahakeliny mba hananana vintana handrombahana tokana mandritra ny telo alina amin'ny trano fialan-tsasatra any Seychelles.